fitRAIL, ankafizo ny iPado rehefa manao fanazaran-tena amin'ny gym. Vaovao IPhone
Azo antoka fa maro aminareo no manao fanatanjahan-tena matetika ary mankany amin'ny gym, na ny tsara kokoa aza, dia manana gym any an-trano ianareo. Ny fanombohana ny fanazaran-tena amin'ny gym dia mazàna no mankaleo indrindra satria ny manafana dia ilaina mba hisorohana ny ratra ka ny kasety kely na bisikileta kely dia hanampy antsika amin'izany asa izany.
Ahoana raha rehefa mafana ianao, dia ampialana voly amin'ny iPad ianao? Scosche dia nanao fitaovana vaovao ahafahantsika mametraka ny iPad mivantana amin'ny treadmills maro na maodely bisikileta sasany, amin'ity fomba ity, afaka mijery sarimihetsika isika, mihaino mozika, mivezivezy amin'ny Internet am-pitoniana na mijery ireo angon-drakitry ny fiofanana.
Ny fijoroana dia vita amin'ny aliminiôna sy vy mba hiantohana ny faharetany rehefa mandeha ny fotoana, mifanaraka amin'ny iPad / iPad 2 izy io ary manohana azy rehefa tsy ao amin'ny gym izahay.
Ny vidin'ny fitRAIL dia $ 49,99 ary azonao atao ny mividy azy mivantana amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » fitRAIL, ankafizo ny iPado rehefa manao fanazaran-tena amin'ny gym